राजदूत डा. सुवेदी चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरी नेपाल फर्किए - Himalayamail.com
राजदूत डा. सुवेदी चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरी नेपाल फर्किए
लण्डन। बेलायतका लागि नेपालका राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदी आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरी आइतबार नेपाल फर्किएका छन्। श्रीमती पूनम राज्य लक्ष्मी सुवेदीका साथ नेपाल प्रस्थान गरेका राजदूत सुवेदीलाई लण्डनस्थित राजदूतावासका कर्मचारीहरुले बिदाई गरेका थिए ।
आइतबार नेपाल फर्कनु अघि एक विज्ञप्ति जारी गरि राजदूत सुवेदीले राजदूतका रुपमा रहंदा आफुलाई प्राप्त स्नेह, सहयोग र सद्भावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उनले संयुक्त अधिराज्य, आयरल्याण्ड तथा माल्टामा बसोबास गरिरहेका सबै नेपालीहरुलाई सुख, सुस्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको कामना पनि गरेका छन्।
‘दुबसु क्षेत्री’ नामले साहित्यिक जगतमा चिनिने राजदूत सुवेदीले आफ्नो बेलायत प्रवासका क्रममा नेपाल-बेलायत सम्बन्ध तथा बेलायतस्थित नेपाली साहित्यकार/लेखकहरुका रचना समावेश गरी थुप्रै कृति प्रकाशन तथा सम्पादन समेत गरेका छन्।
बेलायतका लागि नयाँ राजदुतका रुपमा पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भइसकेका छन्। राजदुत रेग्मी यहि फागुन महिना भित्र बेलायत आइपुग्ने बताइएको छ।